Ahịa MacBook na Q2020 XNUMX karịrị ọtụtụ akwụkwọ ndetu PC | esi m na mac
Tony Cortes | | MacBook, Noticias
Mgbe Craig Federighi O gosiri anyị na nke mbụ Macbook nke Apple Silicon oge, otu afọ na ọkara gara aga, ọ dọọrọ ọnụ ọchị n'ihu ya. N'ihi na ọ maara nke ọma ihe o ji n'aka. Ma ọ bụ ezie na site n'èzí ọ dị ka nzọ dị ize ndụ, Apple tinyere ihe niile n'ihe ize ndụ n'ịnyịnya mmeri.
Obi abụọ adịghị ya, echiche nke ịgbanwe Apple Mac niile, ruo taa na ndị na-arụ ọrụ Intel, maka ndị ọhụrụ na ndị na-emepụta ARM nke ha abụrụla ihe ịga nke ọma n'akụkụ ụlọ ọrụ ahụ. Macs, nke nọgidere na-adịgide adịgide ruo ọtụtụ afọ na ahịa kọmputa n'ozuzu, na-ekere òkè dị ukwuu n'ihi mgbanwe ahụ. Apple sịlịkọn.
Ọhụrụ akụkọ de Usoro nyocha, a prestigious ahịa nyocha ụlọ ọrụ, na-egosi ire nke Laptọọpụ ahịa maka nkeji nke anọ nke 2021. Ma kwuru na ọmụmụ na-ekpughe na ngụkọta ahịa ọnụ ọgụgụ maka MacBook karịrị ihe fọrọ nke nta niile na-emepụta nke Windows dabeere na laptọọpụ.
Ọnụọgụ na-egosi ya: Apple rere 6,6 nde nke MacBooks n'oge ahụ, na-eto 11% ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ọnụ ọgụgụ ndị ahụ n'otu nkeji nke anọ nke 2020.
Ọnụ ọgụgụ nke laptọọpụ Apple bụ naanị onye nrụpụta ọzọ karịrị ya, Dell, onye mmụba ya n'otu nkeji nkeji bụ 14%. Chirag Upadhyay, onye nyocha ahịa, na-arụ ụka maka ahụike dị mma nke ire laptọọpụ n'oge oria ojoo na anyị ka na-adọkpụ gburugburu ụwa, nke na-amanye ọtụtụ ụlọ ọrụ ịmegharị ndị ọrụ ha na mpaghara ọrụ ngwakọ, ọkara n'etiti ụlọ ọrụ na ụlọ.
Ihe kpatara ọnụọgụgụ ndị a
Ọ na-akwado ndị ezi ahịa ọnụ ọgụgụ nke anọ nkeji iri na ise ka enweghị ngwaahịa na gara aga nkeji iri na ise ruru ka ụkọ mgbawa. Ọtụtụ kọmpụta ndị enyerelarị iwu na nkeji nke atọ nke afọ, enwetabeghị ya ruo nkeji nke anọ, si otú a na-abawanye ọnụ ahịa ahịa n'ozuzu ya na njedebe nke afọ.
Akụkọ ahụ kwubiri na ọnụ ọgụgụ dị mma maka MacBook na laptọọpụ ndị dabeere na Windows banyere ọdịda na Chromebooks bụ n'ihi ihe ịga nke ọma Apple na Apple Silicon ya, na nnukwu ọchịchọ Krismas maka laptọọpụ "Gamer", ha niile dabeere na Windows.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ịre MacBook na Q2020 XNUMX karịrị ọtụtụ laptọọpụ PC
E wepụtara ụdị WatchOS 8.4.1 maka ndị ọrụ niile
Ihe ịma aka ọrụ ọhụrụ maka Apple Watch n'ime ọnwa nke obi